Uchwepheshe we-Semalt: Izimo eziyishumi zokuphepha ze-Cyber ​​ezibonakalayo
Umkhakha wezokuphepha we-cyber uqhubeka ngokuqhubekayo nabanye ochwepheshe abajoyina imboni.Ngenxa yalokho, isofthiwe enonya kakhulu futhi yenzelwe futhi i-malware engaba ngu-230 000 000 isunguliwe nsuku zonke.Kulinganiselwa ukuthi kutshalwa imali yamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-100 njalo ngonyaka ukuze kuqalwe nobugebengu be-cyber.
Uma nje usebenzisa i-intanethi, ujwayele ukuhlaselwa kwe-cyber. Okulandelayoimibono ka Nik Chaykovskiy, the i-Semalt Isiphathi Esiphezulu Sempumelelo Yekhasimende, sibonisa ukuthi kuyingozi kangakanani kusiphequluli ukusebenza ngaphandle kokuvikelwa okusebenzayo.
1. Abahlaseli be-cyber abayingozi kakhulu emhlabeni jikelele
I-FBI inehlu lwezigebengu ze-intanethi ezifunwa kakhulu ezingu-19 ezibhekene nazoukulahlekelwa kwabasebenzisi bewebhu ngaphakathi kuka-$ 350,000 kuya ku-$ 100 million. Kulo mzuzwana, izihloko ze-JABBERZEUS zifunwa kakhulu yi-FBI.
2. I-virus eyinkimbinkimbi kakhulu yekhompiyutha emlandweni
I-MyDoom ibonakala njengezindleko ezinkulu emhlabeni wonke emlandweni we-cyberukuphepha. Kucatshangwa ukuthi igciwane selize laholela ekulimaleni kwe $ 38.5 billion.
3. Inhloso ekhethwayo yabahlaseli bezokuxhumana
Kusesikhathini samanje, kunabasebenzisi abangaphezu kuka-1.6 billion abasebenzisa imithombo yezenhlalo emhlabeni jikeleleinhloso yokukhetha ye-hacker. Abasebenzisi abachitha isikhathi esibalulekile ekuxhumaneni nomphakathi bangase babe nesisulu salokhu kuhlaselwa.
4. Amakhompiyutha angu-99% asengozini yokukhishwa kitshi
Amakhompyutha angaphezu kwamaphesenti angu-99 anezinhlelo ezifana ne-Adobe Reader, i-Oracle Java, ne-AdobeI-Flash efakwe ohlelweni lwayo lokusebenza. Ukuba khona kwalezi software kwakha umzila lapho, abahlaseli bangakwazi ukwandisa ukufinyelelaigajethi yakho..
5. Izigebengu ze-intanethi zithandwayo zokuthonya izisulu
Izisulu zokuhlaselwa kwe-cyber zisetshenziselwa kalula ngoba abantu benza isixhumanisi esibuthakathakamayelana nokuphepha kwe-cyber. Ngenxa yalokho, ubunjiniyela bezenhlalakahle kubhekisela endleleni yokuqinisekisa ukuthi abantu baveza imfihlo ngokuphathanabo ngokwengqondo.
6. Ukuqapha kwezokuphepha: imisebenzi yangaphakathi
Ezimweni eziningi, cishe amaphesenti angu-59 abasebenzi abamba idatha yenhlangano umabaxoshwa noma uma beyeka. Okunye ukuphoqelelwa kwangaphakathi ukulondeka kufaka phakathi izimbangi ezinonya, ukungena okungenandaba nokuxhaphaza.
7. Uhulumeni wakho ukwandisa ubungozi bakho
Kuyiqiniso ukuthi ohulumeni emhlabeni jikelele bahlela i-malware ngenhlosoyokusebenzisa njengesikhali sedijithali. I-malware ithola indlela eya enhlanganweni yangasese namakhompiyutha abo okubangela ukuziphendukela kwemvelo okuthuthukisiwewe-malware yobugebengu.
8. Kukhona imephu esheshayo ebonisa abahlaseli esenzweni
I-United States yiyona inhloso ekhethiwe yezigebengu ze-cyber. Ngokwesibonelo, iUmnyango Wezokuvikela we-U.S ulahlekelwe ngaphezu kwezigidi eziyizigidi eziyizigidi zamadola ($ 100 million) ngokulimala ngenxa yokuhlaselwa okwenziwa ngumuntu waseChina.
9. I-Cybercrime kuyinselele enkulu emhlabeni
68% yemali elahlekile ngenxa yokuhlaselwa kwe-intanethi ibhekwa njengengatholakali.Ubugebengu be-Cyber ​​abukali nje kuphela kodwa buyabangela nezinye izinselelo ezinkampanini emhlabeni wonke.
10. Hacktivism yilona ugqozi oluyinhloko olushukumisa ukuhlasela kwe-cyber
I-Hacktivism ibalwa ngamaphesenti angaba ngu-50 azo zonke ukuhlasela kwe-cyber emhlabeni jikelele. Leli gama liyiukumelelwa kwezicelo eziphikisayo zama-computer ngenhloso yokuthuthukisa uhlelo lwezepolitiki.
Khumbula njalo, ukuthi akufanele ubeke phansi izigebengu ze-intanethi. Ngakho akekho umlondoloziukuphumelela, akukho usongo okuncane kakhulu. Kungakhathaliseki ubukhulu besongelo lokuphepha kwe-cyber, izinyathelo ezifanele kufanele zibekweukuvimbela noma yikuphi ukuhlasela ongabhekana nakho.